Ihe ozo ohuru nke usoro Bentley Institute: N'ime MicroStation CONNECT Edition - Geofumadas
Julaị, 2020 AutoCAD-AutoDesk, Akụziri CAD / GIS, Engineering, IntelliCAD, Microstation-Bentley
EBentley Institute Press, onye na-ede akwụkwọ nke nwere isi akwụkwọ na ọrụ akwụkwọ ntụnye aka maka ndị ọkachamara maka mmepe nke injinịa, ihe owuwu, ihe owuwu, ọrụ, agụmakwụkwọ na agụmakwụkwọ, ekwuputala na enwere akwụkwọ ọhụrụ nke isiokwu ya "N'ime MicroStation CONNECT Edition" , dị ugbu a ebipụta ebe a dị ka akwụkwọ elektrọn n’ime www.ebook.bentley.com
Ihe olu a nwere mpịakọta atọ na-elekwasị anya n’inwe nghọta siri ike nke ihe ndabere MicroStation ma soro usoro nzọụkwụ nke gụnyere ezigbo ihe atụ na mmega. Akwụkwọ ndị a na-akụziri ndị na-agụ akwụkwọ otu esi eji MicroDation nke 2D chepụta ụkpụrụ ma tọọ ntọala maka mmụta dị elu. Enwere ike ịchọta usoro ahụ na Amazon Kindle (mpịakọta I, II, na III) na Apple (mpịakọta I, II, na III). Akwukwo akwukwo a bu ezigbo oru ihe omuma na ntuziaka ngwa ngwa maka umu akwukwo, ndi mbido, na ndi okacha amara.
Usoro akwụkwọ ahụ gosipụtara uru dị na iji mbipụta CONNECT ma na-ekwu banyere atụmatụ nke MicroStation CONNECT Edition, gụnyere ike ọhụrụ CAD na ike ya na njirimara iji hụ n'ụzọ ziri ezi, ihe nlereanya, na -echekwa ma jiri anya ya hụ ihe ọmụma bara ụba nke ụdị na akpịrịkpa niile. . MicroStation CONNECT Edition bụ maka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ọzụzụ niile na akụrụngwa akụrụngwa nke ụdị niile.
“Obi dị anyị ụtọ inye aha a Bentley Institute Press na-eche oge a, nke ga-enyere ndị injinia aka ịwuli elu na arụpụta ihe mgbe ha na-arụ ọrụ na MicroStation. Ọkachamara sitere na Bentley, Samir Haque, Smrutirekha Mahapatra, na Shaylesh Lunawat achịkọtala ahụmịhe nke afọ na mmụta ha mụtara ide akwụkwọ atọ ndị a. Ana m atụ anya na ndị niile na - agụ usoro a ga - enwe ike iwelite ikike nke MicroStation CONNECT Edition ma kwalite ọrụ ha na usoro akwụkwọ a. ” Vinayak Trivedi, onye isi oche na onye isi ụwa, Bentley Institute
Olu m bu n’obi maka ndị ọrụ chọrọ ịma ihe dị na ngwanrọ a wee kọwaa otu esi ahazi gburugburu eserese. Olu nke Abụọ na-eduzi ndị na-agụ ya site na usoro nke ịmepụta ihe na ịgbanwe ihe site na iji ike dị iche iche. Mpịakọta nke III na-ewebata usoro ọrụ dị elu dịka okike sel na itinye ya, ịkọwapụta, ndozi nrụpụta, ihe mpempe akwụkwọ, na ibipụta akwụkwọ.
Samir Haque bụ injinia na ọkà mmụta sayensị nwere ogo na bayoloji, ihe ọmụmụ ọkụ eletrik, injin na ahụ. Ọ malitere na CAD dị ka onye nyocha na UCLA, ebe o jiri MicroStation chepụta akụkụ 3D maka nnwale na ụgbọ elu mbara igwe maka ọmụmụ ihe ọmụmụ physics na nchekwa akwara. Haque ejirikwara sọftụwia see maa ụbụrụ na 3D na Brain Research Institute. N'ime afọ 23 gara aga na Bentley, Haque zụrụ ọtụtụ puku ndị ọrụ na MicroStation ma dee ọtụtụ akwụkwọ na ngwanrọ. Haque ugbua na-ahụ maka mmepe nke PowerPlatform, na-eduzi njikwa ngwaahịa na otu mmesi obi ike dị mma.
Shaylesh Lunawat nwetara nzere nke injinia si Mahadum Pune. Ọ malitere ọrụ na nrụpụta akụrụngwa nchekwa, tupu ya arụ ọrụ na Bentley site na 2008 ruo 2019 dị ka onye njikwa ederede ọrụ. N ’ọkwa a, Lunawat bụ ọrụ maka imepụta akwụkwọ ntuziaka dị iche iche na MicroStation na ngwa Bentley ndị ọzọ.
Smrutirekha Mahapatra sonyeere Bentley na 2016 dị ka onye edemede ọrụ aka ma na-edu ndị otu akwụkwọ PowerPlatform. Tupu ọ banye na Bentley, Mahapatra bụ onye na-ese ụlọ nwere ụlọ ọrụ dị iche iche na nhazi ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ azụmahịa, na ụlọ ọgwụ. N'oge ọrụ ya na-ewu ụlọ, ọ jiri ngwa ọrụ CAD dị iche iche maka ịnye oru ngo. Mahapatra nwetara akara AA na njikwa ike site na Kirsch Center maka Mmụta Gburugburu Ebe obibi.
Previous Post«Previous Esri na-ebi akwụkwọ Smarter Government Workbook nke Martin O'Malley dere
Next Post Vexel eweputara UltraCam Osprey 4.1Osote "